Mutori wenhau anoshanda akazvimirira, Nyashadzashe Ndoro, ambosungwa nhasi pamwe nenhengo dzesangano reZimbabwe National Students Unions, Zinasu, idzo dzange dzichiratidzira padare reRotten Row Magistrate Courts muHarare.
Nhengo dzeZinasu dzaenda padare riri dzichiratidzira kutsutsumwa kwadzo nekusungwa kwevatungamiri vesangano iri vanosanganisira mutungamiri wesangano iri, VaTakudzwa Ngadziore nemunyori waro, VaTapiwanashe Chiriga.
Ndoro audza Studio7 kuti ange achiita basa rake uye ashamisika zvikuru apo asungwa nemapurisa.
Ndoro ati mapurisa atanga asunga nhengo dzeZinasu ndokuenda nadzo asati amusunga.
Ndoro audza Studio7 kuti azoburitswa muhusungwa mushure memaawa matatu uye mushure mekunge magweta ake kubva kuZimbabwe Lawyers for Humun Rights aenda kukamba yemapurisa.
Gweta range rachimira Ndoro nenhengodze Zinasu, VaNtokozo Dube-Tachiona, vaudza Studio 7 kuti Ndoro aregedzwa nemapurisa asi havana ruzivo rwekuti nhengo dzeZinasu dzichaburitswa muhusungwa here sezvo vange vari kurambidzwa kuona nhengo idzi pataenda pamhepo.
Zvichakadai mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights, VaKumbirai Mafunda, vaudza Studio 7 kuti dare richapa mutongo waro mangwana pachikumbiro chevatungamiri veZinasu chekuti vatongwe vachibva kumba
VaNgadziore nevamwe vavo vari kupomerwa mhosva yekuti vakataura nevatori venhau padare panguva yeCovid-19, apo vainge vaenda kunotsigira vaimbove munyori weZinasu, VaMakomborero Haruzivishe.
Gweta ravo, VaJeremiah Bamu, vaudza Studio7 kuti vaonoona sekuti nyaya iyi haina maturo nekuti vatori venhau vanobvumidzwa kuita basa ravo nguva ipi zvayo..
Zvichakadai makambani emabhazi anoti haazi kufara nekuti kanzuru yeHarare yakwidza mari dzinobhadharwa kumisika zvakanyanyanya asi mutauriri weHarare City Council, VaMike Chideme, vaudza Studio 7 kuti kukwidzwa kwemitengo iyi kwakabvumwa nehurumende mubhajeti ra2021.
Hurumende yakabvuma hurongwa hwemashandisirwo emari dzemakanzuru ese munyika ikakurudzira kuri mabhajeti anofanira kusimudzira raramo yevanhu yakanaka.